ဒေါက်ဇော်ကတော့ ပြောတဲ့အတိုင်း တကယ်ဆော်ပြီနော် ကောင်းစေချင်လို့ဆိုတာကို သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ် – Amara News
ဒေါက်ဇော်ကတော့ ပြောတဲ့အတိုင်း တကယ်ဆော်ပြီနော် ကောင်းစေချင်လို့ဆိုတာကို သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်
#မန္တလေးတစ်ခရိုင်လုံး Stay at Homeတစ်အိမ်တစ်ယောက်သာဈေးဝယ်ထွက်ရန်ကဒ်ပြားနှင့်တကွ ထွက်ပါ(ယာဉ်မောင်းပါခွင့်ရှိ)ဆေးရုံ / ဆေးခန်း သွားလိုလျှင်ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ အကြောင်းကြားခွင့်ပန်မဖြစ်မနေ ဖွင့်လှစ်ရမည့် အစိုးရရုံးဝန်ထမ်း၊ဘဏ်ဝန်ထမ်းများ ဝန်ထမ်းကဒ် ပြနိုင်ရမည်။
မိမိမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဈေးတွင်သာ ဝယ်ယူရန် မြို့နယ်အားလုံး ညီရန် လိုပါသည်။Mobile team (၄)ဖွဲ့ ဖွဲ့၍ ပတ်ကားဖြင့် ပတ်နေပါမည်။(ချမ်းစံ စီစဉ်ထားမှု့)လမ်းပေါ်တွင် တွေ့သမျှ မည်သူမဆို ရှောင်တခင်မေးမြန်းစစ်ဆေး၍
၁။ အဘယ့်ကြောင့် လမ်းပေါ်တွင် ရှိနေသနည်း ?
၂။ ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက အလုပ်ချိန်အတွင်း မိမိရုံးတွင် မရှိဘဲ အဘယ်ကြောင့် လမ်းပေါ်တွင် ရောက်နေပါသနည်း?#ဝန်ထမ်းကဒ်ပြခိုင်းမည်။#အကြောင်းပြချက်ပေးခိုင်းမည် – (ဥပမာပြောခြင်း)
အကြောင်းပြချက် ခိုင်လုံသော်လည်းMask မတပ်ပါက ဒဏ်ငွေ ရိုက်ပါမည်။ငွေမပါက Q center များသို့ ခေါ်ဆောင်ပြီး သန့်ရှင်းရေး လုပ်ခိုင်းမည်(Social Punishment)ရပ်ကွက်တိုင်းတွင်Covid19 ကာကွယ်ထိမ်းချုပ်ရေး ဒေသန္တရအမိန့်များကိုသာမက ရပ်ကွက်အလိုက် ဖြစ်ပွားမှု့အခြေအနေကို အသိပေးကြေငြာမည်။
ဘာ့ကြောင့် ဒီလောက်ထိ လုပ်လာရသလဲဆိုလျင်#အရာရာကိုလွယ်လွယ်တွေး၍#လွယ်လွယ်လုပ်တတ်သောအကျင့်ရှိသူတို့ကြောင့်မသေသင့်ဘဲ သေရသူ၊ပိုးကူးစက်ခံရသူတို့ ရှိလာပြီး အခြားသော တာဝန်ရှိသူများ ကိုယ်ရောစိတ်ပါပင်ပန်းလာကြပြီ ဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့်Covid 19 ကူးစက်ပြန့်ပွားမှု့ကို ထိမ်းချုပ်ရန်မှာ ပြည်သူတရပ်လုံး တာဝန်ဖြစ်၍ ယခုအချိန်မှ စတင်ပြီး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာကြပါရန် အလေးအနက် တိုက်တွန်းပါသည်။
Dr Lin Lin Chit၄.၁၂.၂၀၂၀
ဒေါကျဇျောကတော့ ပွောတဲ့အတိုငျး တကယျဆျောပွီနျော ကောငျးစခေငျြလို့ဆိုတာကို သဘောပေါကျဖို့လိုတယျ
#မန်တလေးတဈခရိုငျလုံး Stay at Homeတဈအိမျတဈယောကျသာဈေးဝယျထှကျရနျကဒျပွားနှငျ့တကှ ထှကျပါ(ယာဉျမောငျးပါခှငျ့ရှိ)ဆေးရုံ / ဆေးခနျး သှားလိုလြှငျရပျကှကျအုပျခြုပျရေးမှူးထံ အကွောငျးကွားခှငျ့ပနျမဖွဈမနေ ဖှငျ့လှဈရမညျ့ အစိုးရရုံးဝနျထမျး၊ဘဏျဝနျထမျးမြား ဝနျထမျးကဒျ ပွနိုငျရမညျ။
မိမိမွို့နယျအတှငျးရှိ ဈေးတှငျသာ ဝယျယူရနျ မွို့နယျအားလုံး ညီရနျ လိုပါသညျ။Mobile team (၄)ဖှဲ့ ဖှဲ့၍ ပတျကားဖွငျ့ ပတျနပေါမညျ။(ခမျြးစံ စီစဉျထားမှု့)လမျးပျေါတှငျ တှသေ့မြှ မညျသူမဆို ရှောငျတခငျမေးမွနျးစဈဆေး၍
၁။ အဘယျ့ကွောငျ့ လမျးပျေါတှငျ ရှိနသေနညျး ?
၂။ ဝနျထမျးဖွဈပါက အလုပျခြိနျအတှငျး မိမိရုံးတှငျ မရှိဘဲ အဘယျကွောငျ့ လမျးပျေါတှငျ ရောကျနပေါသနညျး?#ဝနျထမျးကဒျပွခိုငျးမညျ။#အကွောငျးပွခကျြပေးခိုငျးမညျ – (ဥပမာပွောခွငျး)
အကွောငျးပွခကျြ ခိုငျလုံသျောလညျးMask မတပျပါက ဒဏျငှေ ရိုကျပါမညျ။ငှမေပါက Q center မြားသို့ ချေါဆောငျပွီး သနျ့ရှငျးရေး လုပျခိုငျးမညျ(Social Punishment)ရပျကှကျတိုငျးတှငျCovid19 ကာကှယျထိမျးခြုပျရေး ဒသေန်တရအမိနျ့မြားကိုသာမက ရပျကှကျအလိုကျ ဖွဈပှားမှု့အခွအေနကေို အသိပေးကွငွောမညျ။
ဘာ့ကွောငျ့ ဒီလောကျထိ လုပျလာရသလဲဆိုလငျြ#အရာရာကိုလှယျလှယျတှေး၍#လှယျလှယျလုပျတတျသောအကငျြ့ရှိသူတို့ကွောငျ့မသသေငျ့ဘဲ သရေသူ၊ပိုးကူးစကျခံရသူတို့ ရှိလာပွီး အခွားသော တာဝနျရှိသူမြား ကိုယျရောစိတျပါပငျပနျးလာကွပွီ ဖွဈပါသညျ။ထို့ကွောငျ့Covid 19 ကူးစကျပွနျ့ပှားမှု့ကို ထိမျးခြုပျရနျမှာ ပွညျသူတရပျလုံး တာဝနျဖွဈ၍ ယခုအခြိနျမှ စတငျပွီး စညျးမဉျြးစညျးကမျးမြားကို လိုကျနာကွပါရနျ အလေးအနကျ တိုကျတှနျးပါသညျ။
Previous Article ရွေးကောက်ပွဲမှာ သမ္မတ ဘယ်လောက်သုံးခဲ့လဲ
Next Article လက်မ ကောက်တဲ့သူနဲ့ဖြောင့်တဲ့သူများ၏ စိတ်နေသဘောထား